साख जोगाउने कसरत - मनोरञ्जन - नेपाल
रेखा थापासँग किस्मतमा स्क्रिन सेयर गरेपछि आर्यन सिग्देलको किस्मत चम्कियो । यो जोडीको हिफाजत र कसले चोर्‍यो मेरो मन पनि हिट भयो । त्यसपछि सम्बन्धमा दरार । बोलचालै बन्द भएको सात वर्षपछि आर्यन फेरि रेखासँगै देखापरे, रुद्रप्रियामा । विडम्बना ! ओरालो लागेको आर्यनको करिअरमा यस फिल्मले थोरै भरथेग पनि गरेन । रेखासँग जोडी बाँध्दा माखो नमरेकाले हुनुपर्छ, नयाँ फिल्मका लागि उनले यो समयकी हटकेक नायिका साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहलाई रोजेका छन् । फिल्म हो, कायरा । लक्ष्मण रिजालको निर्देशन रहने यस फिल्ममा आर्यनको साथमा साम्राज्ञी देखिने पक्कापक्की भएको हो । तर, आर्यनले आफ्नो करिअरमा टेवा पुग्ने लालसामा भन्दा पात्र सुहाउँदो भएकाले साम्राज्ञीलाई अनुबन्ध गरेको बताएका छन् । उनको बोलीमा कति दम छ ? समयले नै बताउला ।